शाकाहारीहरूका लागि केटो डाइट: यी कम कार्ब तरकारीहरू तपाईंको केटो आहारमा समावेश गर्नुहोस्! | Nepal Online Patrika
Home स्वास्थ्य शाकाहारीहरूका लागि केटो डाइट: यी कम कार्ब तरकारीहरू तपाईंको केटो आहारमा समावेश...
शाकाहारीहरूका लागि केटो डाइट: यी कम कार्ब तरकारीहरू तपाईंको केटो आहारमा समावेश गर्नुहोस्!
Nepal Online Patrika: केटो डाइट तरकारीहरू: तरकारीहरू धेरै महत्त्वपूर्ण पोषक तत्वहरूले भरिएका हुन्छन्। तपाईं आफ्नो क्याटो आहारमा कम कार्ब तरकारीहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ केहि तरकारीहरूको सूची छ जुन तपाईंले केटो डाईटमा समावेश गर्नुपर्दछ। यी तरकारीहरू शाकाहारीका लागि शाकाहारीका लागि केटो डाइट प्लानमा पनि समावेश गर्न सकिन्छ।
शाकाहारीहरुका लागि केटो डाइट: तरकारीहरू तपाईको खानाको अत्यावश्यक अंश हुनुपर्छ। तिनीहरू वजन घटाउन अनुकूल छन् र साथै तपाईंलाई विभिन्न प्रकारको पोषक तत्वहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको समग्र स्वास्थ्यलाई बढावा दिन सक्छ। त्यहाँ धेरै तरकारीहरू उपलब्ध छन् जुन तपाईंको आहारको एक हिस्सा हुन सक्छ। केटो डाईटको पालना गर्दा, यसले तपाईंको कार्ब सेवन प्रतिबन्धित गर्दछ। त्यो हो, यसले कम कार्बको खपत सुनिश्चित गर्न सक्छ। यो कम कार्ब आहार हो जुन स्वस्थ फ्याट सेवनमा बढी केन्द्रित हुन्छ। धेरै मानिसहरूले कार्बोको कारणले केटोको खानामा तरकारी खान छोड्छन्। तरकारीहरू धेरै महत्त्वपूर्ण पोषक तत्वहरूले भरिएका छन्।
तपाईं आफ्नो क्याटो आहारमा कम कार्ब तरकारीहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ केहि तरकारीहरूको सूची छ जुन तपाईंले केटो डाईटमा समावेश गर्नुपर्दछ। यी तरकारीहरू शाकाहारीका लागि शाकाहारीका लागि केटो डाइट प्लानमा पनि समावेश गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईं उच्च रक्तचापबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि यी things चीजहरूलाई आहारमा समावेश गर्नुहोस्, उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा रहनेछ!
केटो डाइटका लागि कम कार्ब तरकारीहरू। केटो डाइटका लागि कम कार्ब तरकारीहरू
१. ब्रोकोली :
यो हरी तरकारीसँग कम कार्ब्स र धेरै स्वास्थ्य लाभहरू छन्। यो प्रोटिन, फाइबर, भिटामिन सी, फोलेट, भिटामिन K1, जिंक, फलाम र अधिकको साथ लोड गरिएको छ। यो विभिन्न तरिकाले पकाउन सकिन्छ। तपाईं यसलाई सलाद, स्यान्डविच, पास्ता र अधिकमा थप्न सक्नुहुन्छ।
स्वस्थ गाउट डाइट: गाउटसँग तंग आयो? गाउटबाट राहत पाउनको लागि आहारमा केही परिवर्तनहरू गर्नुहोस्!
२. बेल पेपर :
रंगीन बेल मिर्च एक राम्रो स्वाद साथ साथै पोषण मूल्य छ। तिनीहरू एन्टिआक्सीडन्ट र भिटामिन ए र सी समृद्ध छन्। बेल मिर्चमा कम कार्बहरू छन् र सजिलैसँग तपाइँको केटो आहारमा फिट हुन सक्दछन्।
पालक एक स्वास्थ्यकर पात पात साग मध्ये एक हो। तपाईको खानामा पर्याप्त पालक राख्नु राम्रो हुन्छ किनकि यसले धेरै स्वास्थ्य लाभहरू प्रदान गर्दछ। पालक विटामिन ए, सी र के मा समृद्ध हुन्छ। यसमा म्याग्नीशियम, फलाम र पोटासियम पनि हुन्छ।
4. हरियो सिमी :
कार्बको मात्रा हरियो सिमीमा कम हुन्छ। तिनीहरूसँग क्यालोरी पनि कम छ र फाइबरको पर्याप्त मात्रा हुन्छ। हरियो सिमीले तपाईंलाई फोलेट, भिटामिन के र भिटामिन सी प्रदान गर्न सक्छ। हरियो सिमी फलफूल परिवार को एक सदस्य हो।
5. काले :
काल अर्को पत्तेदार हरिया तरकारी हो, जसले विभिन्न पोषक तत्वहरू र कम कार्ब्स समावेश गर्दछ। यसले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न र हृदय रोग र टाइप २ मधुमेहको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ। केल प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई मजबुत बनाउन पनि लाभदायक मानिन्छ।
Previous articleकपालको वृद्धिको लागि भिटामिन सी: यदि तपाईं छोटो कपालबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने, आफ्नो कपाल बढाउनको लागि भिटामिन सीको सेवन बढाउनुहोस्!
Next articleनयाँ फिल्ममा साम्राज्ञी